शुक्रबारको राशीफल : धनआर्जन, लगानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, प्रेम र परिवारका लागि तपाईको समय कस्तो छ ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
शुक्रबारको राशीफल : धनआर्जन, लगानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, प्रेम र परिवारका लागि तपाईको समय कस्तो छ ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ श्रावण २४ गते शुक्रबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट ०९ तारिख, श्रावण शुक्ल नवमी, अनुराधा नक्षत्र, बृश्चिक राशिको चन्द्रमा, ब्रह्म योग, कौलव र तैतिल करण ।
प्रेम सम्बन्ध निरसता छ । शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत हुनुहोला । किसिम किसिमका समस्याहरु आइपर्न सक्छ । झैँझगडा र मुद्दामामिलाभन्दा टढा रहनुहोला । यात्रा घातक बन्न सक्छ । लामो दूरीको यात्रा प्रारम्भ गर्नु हुँदैन ।
तपाईँको व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने देखिन्छ । बोले/भनेका कुराले विपरित अर्थ लाग्ने देखिन्छ । धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने सम्भावना छ । गर्नु नपर्ने काममा बढी समय लगाएर गर्नुपर्ला । अप्रिय समाचार सुन्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । समय प्रतिकुल छ । युवायुवतीले रिस र घमण्डमाथि नियन्त्रण गरी संयम रहनुहोला ।
माया, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय वित्नेछ । विपरित लिङ्गी साथीबाट प्राप्त सल्लाहले गरिएको कामबाट विशेष फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सन्तानपक्षको सहयोगमिल्नेछ ।
समय राम्रो छ । प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । हाँसखेल, भ्रमण मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ । परिवारजन र आफन्तसँग आत्मिय सम्बन्ध कायम हुनेछ । तपाईँका विचार र भावनाहरु सकारात्मक देखिनेछ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । जीवनसाथी र आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साझेदारीमा गरिएको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ ।
आमा वा मामाको आर्शिवादले काम गर्न सक्छ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सिर्जनात्मकता र व्यवहारिकतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । घरायासी समस्या समाधान गर्न सकिनेछ ।
माया र प्रेमको वातावरण तयार हुनेछ । तर्क, विवाद र झैझगडा जस्ता क्षेत्र अड्डाअदालतका कामबाट लाभ पाइनेछ । आवश्यक र उपलब्धिमूलक रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । दूरदराजको यात्राको सम्भावना छ । वैदेशिक प्रयोजनको लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ । स्वास्थ्यबा दृष्टिकोणले समेत समय राम्रो छ । आर्थिक लाभ हुनेछ । ऋण सापटी लिन÷दिन आजको दिन अनुकूल छ । पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रदरहनेछ । प्रतियोगिता वा परीक्षामा राम्रो गर्न सकिन्छ ।
बुद्धि पक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ । खासगरी विद्यार्थीहरुका लागि आज प्रगतिको समय छ । अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ । अन्य सबैको समेत बौद्धिक क्रियाकलापमा झुकाव बढ्नेछ । व्यवहारिक र प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । भाइबहिनी र छोराछोरीले सहयोग गर्नेछन् ।
सन्तानपक्षबाट खुशीको समाचार प्राप्त हुनेछ । आफन्तको प्रशंसा पाइनेछ । मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्ने छ घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ । तपाईले गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् । दिनभरीका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ ।
घरपरिवार र छरछिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ । सामाजिक मर्यादा र प्रतिष्ठाका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग वादविवाद पर्न सक्छ । मनमा वैराग्य र निराशाका भाव सञ्चरण हुन सक्छ ।
परिवाभित्रका सानातिना काममा धेरै समय बित्नेछ । कामधन्दामा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हुन्छ । मित्र, सहयोगी र नातागोताको साथ पाइदैन । निर्णायक क्षमतामा कमी आउने छ । त्यसैले कुनै नयाँ काम गर्नुछ भन्ने जान्ने बुझ्ने वा ठूलाबडाको सहयोग लिनु राम्रो छ । घरमा परपाहुनाको आगमन हुने भएकोले छात्रछात्राको अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ ।
सामाजिक काममा संलग्न हुनुपर्ला । दाजुभाइ वा नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा सम्मान र साख जोगाउन सकिनेछ । आकांक्षा पूर्ण हुनेछन् । आम्दानीमा कमी आउने छैन । व्यापारिक वा दैनिक कामहरु सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् ।
अर्थलाभको अवसर आउनेछ । धार्मिक÷सामाजिक काममा प्रंशसित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुनसक्छ । परोपकारी काममा दिलचस्पी बढ्न सक्छ । दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्नेछ । मेवा मिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ । प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने समय चल्दैछ ।
नचिताएको ठाउँबाट धनलाभको संकेत छ । सम्पत्ति लाभ गर्न अनुकूल प्रयास हुनेछन् । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ । साझेदार वा सहयोगीको संगतले फाइदा हुने काम गरिनेछ । दिनचर्या व्यस्त हुनेछ ।
दुरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट र रामरमाइलो गरिनेछ । गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु किन्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । परिवारमा ठूलो जमघट वा कुनै धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिले तपाईको विचारको कदर गर्नेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाउने योग छ ।
आजको समय राम्रो छ । यद्यपि क्रोध, प्रतिशोध, रिसराग र उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुनेछ । नियमित तथा दैनिक कामधन्दा र व्यवसायबाट राम्रो फाइदा हुनेछ । गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउनेछ । बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ ।
मन उत्ताउलो, भावुक र चञ्चल बन्नसक्छ । आजको प्रयास र कामधन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ । त्यसैले आजको विचार र योजनालाई रचनात्मक रुप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ । प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनसक्छ । आज पेसा वा व्यवसायको थालनी गर्न समेत समय राम्रो छ ।
आज सरकारी प्रशासनिक वा अड्डाअदालतमा विचाराधीन रहेको विषयबाट लाभ लिन सकिनेछ । प्रेम सम्बन्धमा आएको तिक्तता हटाउने प्रयास हुनेछ । ढिलै भए पनि काम सम्पादन हुनेछ । लामो दूरीको वा दुरदराजको यात्राबाट लाभ लिन सकिन्छ ।
छिटो समाप्त हुने कुनै काममा लगानीको समय छ । चुनौतीको बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । धैर्य र संयम भई अघि बढ्दा सफल हुने दिन छ । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ । सामाजिक काममा धन खर्च हुने योग छ । व्यापार व्यवसाय सामान्य छ तर बाध्यात्मक काममा धन लगानी हुने भएकोले बजेट असन्तुलित बन्न सक्ने दिन छ ।
साथीभाइ र नातेदारबाट उपयोगी सल्लाह प्राप्त हुनेछ । शारीरिक प्रतिस्पर्धाका कामतिर मन जानेछ । विगतका कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै मन प्रसन्न बनाएर काम गर्नुहोला । सफलता तपाईंको हातमा छ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । आम्दानीमा कमी आउने छैन । भाइबहिनी वा सन्ततिकातर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुनेछ ।
आर्थिक पक्ष सबल बन्नेछ, कारोबारमा गतिशीलता आउने छ र व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ । माया प्रेमका लागि समय जुट्नेछ । विपरित लिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । अड्डा अदालतमा विचाराधिन विषयबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने दिन छ ।
विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधूप गर्नुपर्नेछ । यात्रा रमाइलो हुनेछ । उपाहार प्राप्त हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्यमा अचानक सानो समस्या देखिन सक्छ तर डराइहाल्नु हुँदैन । आफन्तहरुबाट भनेजस्तो सहयोग नपाइएला तर काममा बाधा हुनेछैन ।
साथीहरुसित मनोरञ्जनको अवसर जुर्नेछ । प्रयाससाध्य समय छ । धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धी हुनसक्छ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । आत्मविश्वास जाग्नेछ । अभिभावकको आशिर्वादले काम गर्नसक्छ । श्रममूलक काममा मन जानेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ । व्यवसाय बढाउने वा नवीन रोजागरीको अवसर आउनेछ । कर्मचारीले हाकिम अनुकूल भएर काम गर्नुपर्ने समय देखिन्छ ।
आज जे गरे पनि सफलता पाइने सम्भावना छ । मद्दत लिन चाहनेकोसेवा गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा आत्मियता बढ्नेछ । जीवनसाथी वा बालबच्चासँग भावना बुझ्ने प्रयास हुनेछन् । अभिभावकको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
प्रयास गरेका काममा शुभफल प्राप्त हुनेछ । गरेका काममा भाग्यले साथ दिनेछ । धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा रुचि बढ्नेछ । सामाजिक यश, सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि हुनेछ । रोकिएका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछ । आश मारेको काम पूरा हुनेछ । विगतको परिश्रम समुचित मूल्यांकन हुनेछ । नसोचेको ठाउँबाट आर्थिक लाभ हुनसक्छ ।